Global Voices teny Malagasy » Meksika : Fankalazana ny faha 100 taonan’i Cantinflas · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Aogositra 2011 5:32 GMT 1	 · Mpanoratra Andrea Arzaba Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Sarimihetsika, Zavakanto & Kolontsaina
Ity volana Aogositra ity i Meksika no mankalaza ny zato taona  nahaterahan'i Mario Moreno mpanao hatsikana, diso fantatra amin'ny hoe Cantinflas  . Any Meksika, ary manerana an'i Amerika Latina, Cantinflas dia fantatra ho mpilalao lehibe ary iray amin'ireo mpilalao hatsikana tena be mpitia indrindra any Meksika.
Taranaka maro nifandimby, ankizy sy olon-dehibe no niara-nihomehy tamin'ireo sarimihetsiny, tamin'ny fahitalavitra sy hatsikana. Indray andro tsy hafa fa ilay Amerikana mpilalao hatsikana Charles Chaplin  tenany mihitsy no niantso azy hoe “ilay mpilalao hatsikana velona” 
Cantinflas no nisolo tena ny ankolafy mahantra ao Meksika. Vitany ny nisarika ny sain'ny olona handinika ny tsy fitoviana eo amin'ny mahantra sy ny manankarena taminà fomba tsy nanam-paharoa. Ary na dia nodimandry aza izy, dia mbola manohy izany ihany i Cantinflas amin'ny alalàn'ireo sarimihetsiny.
Mpankafy mankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Cantinflas. Sarin'ny mpampiasa Flickr Globovision (CC BY-NC 2.0).
Ao amin'ny Cuéntame, ilay bilaogera Axel Caballero dia manomboka ny lahatsorany mikasika ny lanjan'i Cantinflas  tamin'ny fahatsiarovan'ny fahazazàny.
Mahatsiaro aho fa nitombo tanatin'ny fijerena ireo sarimihetsika tranainin'i Cantinflas. Tsy nanan-tsiny, nampihomehy sady nahalatsaka. Nisy hevitra tiany hampitaina daholo izy rehetra – fanehoan-kevitra ara-tsosialy momba ny adin-tsaranga sy ny tsy fitoviana ara-toekarena ao anatinà firenena izay matetika voahilika any ambany tsihy . Mari-pamantarana i Cantinflas: niaraka tamin'ilay fomba fiteniny mandray roa, ny fanetren-tenany, ny hafanany ary ambonin'ny ireo rehetra ireo ny fahaizany nampihomehy dia nahasolo tena ny firenena iray manontolo izy.
Ilay bilaogera SotoHoyos ho an'ny El Antagonista dia maneho hevitra momba ny lanjan'ny fankalazana  [es] ilay fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i Cantinflas :
Ankehitriny rehefa niato tsy nahatakatra intsony isika fa hoe ny hatsikana no fomba fanehoana lehibe indrindra ny tsy fankasitrahana sy ny alahelo, zava-dehibe ny manome voninahitra kely ho an'i Cantinflas amin'ny fankalazana ny faha 100 taonan'ny nahaterahany. Fanomezam-boninahitra ho an'ny iray amin'ireo mpanao hatsikana goavan'i Amerika Latina, nanana fahaizana mahasondriana, hainy ny nandinika, namahavaha sy nisaina ireo lohahevitra maro mahakasika ny Meksikana, Latina ary ny kolotsain'izao tontolo izao.
Ao amin'ny bilaogin'ny Los Angeles Times, La Plaza, Ken Ellingwood dia manambara  ilay hetsika ara-kolotsaina atao any Meksika :
Ny firenena, izay mba afaka mitsiky kely, dia manararaotra ilay hetsika mba hankalazàna mandritra ny iray volana maninjitra ny dindony teo amin'ny sarimihetsika sy ny kolotsaina Meksikana
Ny ambiny sisa amin'ny volana Aogositra, ilay mpampihomehy nodimandry […] no ho ivon'ny fampiratiana, lahatsary fahatsiarovana, famelabelarana  ary koa dihy ho fanomezam-boninahitra azy. Manaraka ny aloky ny hazon'ny Paseo de la Reforma, fampisehoana an-kalamanjana sary mainty sy fotsy nalehibeazina ary peta-drindrinà lahatsary miloko no maneho ny fomba nanampian'i Cantinflas  nandrafitra ny fotoana volamenan'ny sarimihetsika Meksikana :
Michael Lopez avy amin'ny Tr3s koa manoritsoritra ny fomba nataon'ny Meksikana hanomezam-boninahitra an'ilay mpanao hatsikana : 
Na 20 taona lasa aza izao i Cantinflas no efa nodimandry , mbola mitoetra ny zava-bitany. Ao Meksiko renivohitra, toeram-pampirantiana an-kalamanjana lehibe ireo sariny sy ny hosodokony no mandravaka ireo arabe be mpampiasa indrindra. Ny kintany (Avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra: fomba fanao any Hollywood ny mametraka sarin-kintana ho an'ireo olo-malazan'ny zavakantony nodimandry) ao amin'ny Walk of Fame ao Hollywood dia nahazo anjara fankalazàna miavaka ny faha 100, tamin'ny voninkazo, karatra, ary fakàna sary mila tsy ho tapitra.
Cantinflas dia mbola mitoetra ho olo-malazan'ny sarimihetsika hatrany ho an'ny olona. Ireo toerana notanany izay nampiseho hatrany ireo iharan'ny tsindry hazo lena, izay zavatra nireharehany manokana. Na dia afaka nifangaro tamin'ny fianakavian'ny mpanjaka aza, Cantinflas dia tsy nanadino mihintsy fa mbola eto ambonin'ny tany / miaina ny zava-misy hita maso.
Anatin'io lahatsoratra io ihany izy dia milaza ny lanjan'i Cantinflas  any amin'ny kontinanta hafa :
Ary aza mieritreritra fa hoe tao Amerika Latina fotsiny no tsapa ny fisian'i Cantinflas. Nanerana an'i Erôpa, ireo gazety samihafa dia samy namoaka ny tantarn'ilay mpanao hatsikana malaza avokoa, tonga hatramin'ny fanomezana anaram-bositra azy hoe “Groucho Marx” avy an'i Meksika.
Ankoatr’ izany lazany tamin'ny sarimihetsika izany, Cantinflas dia tompon'andraikitra tamin'ny fanovàna ny teny Espaniola sasantsasany ho tenin-jatovo, anisan'izany ny matoanteny “Cantinflear,” midika hoe miteny be loatra nefa tsy misy votoatiny / fotony.
Tao amin'ny YouTube, AlJazeera amin'ny teny Anglisy dia nampiditra lahatsary iray  momba an'i Cantinflas sy ny fankalazàna mitranga ao Meksika, ary TeleSur nampakatra misy dikanteny amin'ny teny Anglisy ny tatitra nataon'izy ireo  momba ny fitsingerenan'ny faha 100 taonan'ilay mpanao hatsikana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/27/21186/
 mankalaza ny zato taona: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2011/08/11/international/i022256D18.DTL
 Charles Chaplin: http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
 manomboka ny lahatsorany mikasika ny lanjan'i Cantinflas: http://mycuentame.org/2011/08/11/mexico-celebrates-century-of-comic-cantinflas/
 dia maneho hevitra momba ny lanjan'ny fankalazana: http://elantagonista.com/2011/08/12/%C2%A1cantinflas-el-embajador/
 dia manambara: http://latimesblogs.latimes.com/laplaza/2011/08/mexico-celebrates-comic-giant-cantinflas-on-the-centennial-of-his-birth.html
 fampiratiana, lahatsary fahatsiarovana, famelabelarana: http://www.conaculta.gob.mx/
 manoritsoritra ny fomba nataon'ny Meksikana hanomezam-boninahitra an'ilay mpanao hatsikana :: http://blogamole.tr3s.com/2011/08/12/the-world-celebrates-cantinflas100th-birthday/
 lahatsary iray: http://www.youtube.com/watch?v=GwwPz4jJtKg
 ny tatitra nataon'izy ireo: http://www.youtube.com/watch?v=IzFQCqKGvbs